जीवन शर्माको प्रस्तुति : नेता गम्भिर, दर्शक दङ्ग
सिमली छायाँमा बसी, भरिया लामो सास फेरेको,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता झलनाथ खनाल, मणि थापा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलगायतले आज साँझ राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित ‘संयुक्त साङ्गीतिक साँझ’मा मनोरञ्जन लिए । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्य र नेता सिपी गजुरेल पनि थिए ।
राष्ट्रिय सभागृहको हल भरिएका दर्शकले ‘वान्स मोर’ भन्न भ्याए । दर्शकको सिटी सहितको हुटिङले कलाकारलाई जोस थपेको थियो । जनगायक शर्माले १० भन्दा बढी जनवादी गीत प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सुने । कार्यक्रममा गायक शर्माले एकताको सन्देश यसरी गीतमार्फत् प्रस्तुत गरे ……….
सयाँै जाति जनजाति, हामी सबै नेपाली ।
गीतको भावझैँ शर्माले राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै भने, “हामी सबै नेपाली, देश हामी सबै मिलेर माथि उठाउनु पर्छ ।” दर्शकले हो मा हो मिलाए ।
म निर्धाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै हिँड्छु म,
दुःखीको व्यथा देखेर आँसु बगाउँदै हिँड्छु म ।
जिन्दगीका कहानी सम्झिएर प्रस्तुत भएको उक्त गीतका भावले दर्शक र नेतालाई मन्त्रमुग्ध बनायो । हल नै चकमन्न भयो । सामान्य परिवारका जिन्दगीका कथा उनेका उनका दुःख र वेदनाका गीतहरुले दर्शकलाई मनोरञ्जन मात्रै दिएन, एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको महशुस हुन्थ्यो ।
गीतमा नेपाल र नेपालीका असली पात्रको कहानी भेटिन्थ्यो । ‘म डुल्दै जाँदा तराईको फाँटमा, आधी रातमा हुरी चल्दा, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, झरनाको चिसो पानी, यसपालि त यस्तै भो आमा’ लगायतका गीतमा दर्शक मजैले झुमे । राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बने । विदेशिएका नेपालीलाई फर्काउन श्रम तथा रोजगारमन्त्रीलाई गायक शर्माले आह्वान नै गरे ।
वि.सं. २०४२ मा रचना गरिएको गीत ‘फोकल्याण्डको टापुबाट’ र वि.सं. २०५२ सालको द्वन्द्वका बेलाको ‘समयसँग सम्झौता हैन सङ्घर्ष गर’ लगायत गीतले दर्शकलाई ऊर्जा भरेको थियो ।
त्यहीँ नि साहुले खाइदियो अब मलाई झनै केको डर ।